ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ ကျိန်စာမိနေသော ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီကား (သို့) Crying baby ..! - APANNPYAY
Home / ထူးဆန်းထွေလာ / နိုင်​ငံတကာသတင်း / ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ ကျိန်စာမိနေသော ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီကား (သို့) Crying baby ..!
ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ ကျိန်စာမိနေသော ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီကား (သို့) Crying baby ..!
Apann Pyay 6:38 PM ထူးဆန်းထွေလာ , နိုင်​ငံတကာသတင်း Edit
ငိုနေသော ကလေး ( Crying baby ) အမည်ရ ပန်းချီကားဟာ ကျိန်စာ မိနေတဲ့ ပန်းချီကားလို့ ယနေ့တိုင် ရေပန်းစားလျက် ရှိပါတယ်။ အကြောင်း အရင်းကတော့ ယင်းပန်းချီကားကို အိမ်မှာဆောင်ထားသူတို့ အိမ်မီးလောင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ ကြုံရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းချီကား ဖန်တီးသူ သမိုင်း
စပိန်ပန်းချီဆရာ Bruno Amadio ဟာ ၁၉၁၁ ခုနှစ်ဖွားပြီး ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ သေဆုံးပါတယ်။ သူဆွဲတဲ့ Crying Boy ပန်းချီကား စတင် လက်စွမ်းပြတာကတော့ သူသေပြီး လေးနှစ်အကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Bragolin လို့ပဲ သူ့ကို လူသိများပါတယ်။
ပန်းချီကား ၂၇ ခု ရေးဆွဲပြီး ၁၉၆၀ နဲ့ ၁၉၇၀ ကြားမှာ ကမ္ဘာ အနှံ့ ဖြန့်ချိ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ယင်း ရောင်းချရမှုထဲမှာ ငိုနေသော ကလေးငယ် ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပန်းချီကား အတော်များများလည်း ပါပါတယ်။ တစ်ပုံနဲ့ တစ်ပုံ မတူပါဘူး။ အချို့ ပုံက မျက်ရည်ပါပေမယ့် အချို့ ပုံက ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့ ကလေးငယ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်တာနဲ့ မျက်ရည်ကျ မယ့် ကလေးငယ်လို့ သိရလောက်အောင် လက်စွမ်း အတော် ထက်တဲ့ ပန်းချီကား ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ဈေးကြီးပေး ဝယ်ကြပြီး ဗြိတိန်မှာဆိုရင် ကော်ပီ ပေါင်း ၅သောင်းကျော် မက ရောင်းချ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြဿနာက အဲဒီမှာ စတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းချီမူရင်းပိုင်သူများရော၊ Print ထုတ်ထားတဲ့ ပန်းချီများရော ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူ တော်တော်များများရဲ့  အိမ်များ ဆက်တိုက် မီးလောင်ပါတော့တယ်။ အင်္ဂလန်မှာ အင်မတန် နာမည်ကြီးသွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန် အတွင်းရှိ မြို့  တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပန်းချီကား ပိုင်ဆိုင်သူ အိမ်များ မီးလောင် ပါ တော့တယ်။ ပိုပြီးတော့ ထူးဆန်းတာ တစ်ခုက အိမ်က မီးလောင်သွားပေ မယ့် ပန်းချီကားတွေကျတော့ မလောင်ပဲ ဒီတိုင်း ကျန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မီးတောက်မီးလျှံတွေထဲမှာ ငိုနေတဲ့ ကလေးငယ် ရုပ်ပုံ ဒီတိုင်း ကျန်ရှိနေခြင်းက ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ ဆို ဒီလိုထူးဆန်းတာကို သဘောကျလို့ မီးမစားပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ ပန်းချီကား ကို ဈေးကြီးပေးပြီးတောင် ဝယ်ပါသေးတယ်။ ယင်း တစ်ဆင့် ဝယ်သူရဲ့  အိမ်လည်း မီးလောင်ရပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတုန်းကလည်း အမေရိကန် Yorkshire မှာ ပန်းချီကား ချိတ်ဆွဲတဲ့ အိမ်တစ်လုံး မီးလောင်ရပြန်ပါတယ်။ အတော်ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ သဘာဝလွန် အရာဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ချိတ်ဆွဲပြီး ယခုလို ဖြစ်ရပ်နဲ့ ထပ်ကြုံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်မှာ ကတော့ ၁၉၈၅ ခုနှစ် လောက်ကတည်းက ရှိသမျှ ပန်းချီကားအားလုံးက သက်ဆိုင်ရာက မီးရှို့ ပေးခဲ့ပါတယ်။ သေချာ ထားပြီး ရှို့ ရင်တော့ လောင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပန်းချီကားရှေ့ မှာ မီးမွေးပြီး ကပ်လျက် ထောင်ထားတော့ မီးမလောင်ဘူးဆိုတာကိုလည်း သက်သေ ပြထားပါတယ်။ လောင်ပေမယ့် ဘေးက အနားလောက်သာ လောင်ပြီး ငိုနေတဲ့ ကလေးကတော့ ဒီတိုင်းကျန်ပါတယ်။
ငိုနေသော ကလေးငယ် သမိုင်း
ယင်းပုံကို Bragolin က မီးဘေးဒုက္ခသည် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ကြည့်ပြီး ဆွဲခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိသားစု တစ်ခုလုံး အိမ်မီးလောင်တဲ့ အထဲ ပါသွားပြီး မိဘမဲ့ ကလေးငယ်အဖြစ် တစ်ဦးတည်းသာ ကျန်ရှိပါတယ်။ ယင်း ကျန်ရှိတဲ့ ကလေးငယ်ကို ပန်းချီဆရာ Bragolin ခေါ်ယူမွေးစားပြီး ယခုလို ပန်းချီရေးဆွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တုန်းကတောင် ယင်း ကလေးဟာ အရာဝတ္ထုကို မတိုမထိပဲ မီးလောင်နိုင်စေတယ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်က ယုံတမ်းစကားပြော တားမြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ယင်း စကားကို မမူပဲ ခေါ်မွေးစားပါတယ်။ ပန်းချီ စတူဒီယို မီးလောင်တော့ ယင်းကလေးငယ်ဟာ ထွက်ပြေးပြီး ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ နောက် ၁၀ နှစ်ကြာတော့ ကား အက်ဆီးဒန့် တစ်ခုနဲ့ သေဆုံးနေတဲ့ ဒရိုင်ဘာ တစ်ဦးဟာ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ မိဘမဲ့ ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ ပန်းချီကားနဲ့ သူ့ရဲ့  ဆက်စပ်မှုက ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူး။ ကားတိုက်မှုနဲ့ သေသွားတဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့  အသက် ဝိဥာဏ် သို့မဟုတ် မီးလောင်မှုမှာ သေဆုံးသွားတဲ့ သူ့မိသားစုရဲ့  အသက်ဝိဥာဏ် ကျန်ရှိနေတယ်လို့ အစွဲနဲ့ ယုံကြည်ကြပြီး အားလုံး ကြောက်ရွံ့  ကြပါတယ်။
Supernatural ဆိုတာကို ယုံကြည်သူ ရှိသလို မယုံကြည်သူများလည်း ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ယင်းပန်းချီကား ကတော့ ယနေ့တိုင် Curse of the Crying Boy လို့ အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။
ငိုနသေော ကလေး ( Crying baby ) အမညျရ ပနျးခြီကားဟာ ကြိနျစာ မိနတေဲ့ ပနျးခြီကားလို့ ယနတေို့ငျ ရပေနျးစားလကျြ ရှိပါတယျ။ အကွောငျး အရငျးကတော့ ယငျးပနျးခြီကားကို အိမျမှာဆောငျထားသူတို့ အိမျမီးလောငျတဲ့ ဖွဈရပျနဲ့ ကွုံရလို့ ဖွဈပါတယျ။
ပနျးခြီကား ဖနျတီးသူ သမိုငျး
စပိနျပနျးခြီဆရာ Bruno Amadio ဟာ ၁၉၁၁ ခုနှဈဖှားပွီး ၁၉၈၁ ခုနှဈမှာ သဆေုံးပါတယျ။ သူဆှဲတဲ့ Crying Boy ပနျးခြီကား စတငျ လကျစှမျးပွတာကတော့ သူသပွေီး လေးနှဈအကွာမှာ ဖွဈပါတယျ။ Bragolin လို့ပဲ သူ့ကို လူသိမြားပါတယျ။
ပနျးခြီကား ၂၇ ခု ရေးဆှဲပွီး ၁၉၆၀ နဲ့ ၁၉၇၀ ကွားမှာ ကမ်ဘာ အနှံ့ ဖွနျ့ခြိ ရောငျးခခြဲ့ပါတယျ။ ယငျး ရောငျးခရြမှုထဲမှာ ငိုနသေော ကလေးငယျ ခေါငျးစဉျနဲ့ ပနျးခြီကား အတျောမြားမြားလညျး ပါပါတယျ။ တဈပုံနဲ့ တဈပုံ မတူပါဘူး။ အခြို့ ပုံက မကျြရညျပါပမေယျ့ အခြို့ ပုံက ဝမျးနညျးပူဆှေးနတေဲ့ ကလေးငယျပုံ ဖွဈပါတယျ။ မွငျတာနဲ့ မကျြရညျကြ မယျ့ ကလေးငယျလို့ သိရလောကျအောငျ လကျစှမျး အတျော ထကျတဲ့ ပနျးခြီကား ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး စြေးကွီးပေး ဝယျကွပွီး ဗွိတိနျမှာဆိုရငျ ကျောပီ ပေါငျး ၅သောငျးကြျော မက ရောငျးခြ နိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပွဿနာက အဲဒီမှာ စတာ ဖွဈပါတယျ။
ပနျးခြီမူရငျးပိုငျသူမြားရော၊ Print ထုတျထားတဲ့ ပနျးခြီမြားရော ပိုငျဆိုငျတဲ့ သူ တျောတျောမြားမြားရဲ့အိမျမြား ဆကျတိုကျ မီးလောငျပါတော့တယျ။ အင်ျဂလနျမှာ အငျမတနျ နာမညျကွီးသှားတဲ့ ဖွဈရပျတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ဗွိတိနျ အတှငျးရှိ မွို့တဈခုပွီးတဈခု ပနျးခြီကား ပိုငျဆိုငျသူ အိမျမြား မီးလောငျ ပါ တော့တယျ။ ပိုပွီးတော့ ထူးဆနျးတာ တဈခုက အိမျက မီးလောငျသှားပေ မယျ့ ပနျးခြီကားတှကေတြော့ မလောငျပဲ ဒီတိုငျး ကနျြရှိခဲ့ပါတယျ။ မီးတောကျမီးလြှံတှထေဲမှာ ငိုနတေဲ့ ကလေးငယျ ရုပျပုံ ဒီတိုငျး ကနျြရှိနခွေငျးက ကွောကျစရာ ကောငျးတဲ့ အခွအေနေ ဖွဈပါတယျ။ အခြို့ ဆို ဒီလိုထူးဆနျးတာကို သဘောကလြို့ မီးမစားပဲ ကနျြခဲ့တဲ့ ပနျးခြီကား ကို စြေးကွီးပေးပွီးတောငျ ဝယျပါသေးတယျ။ ယငျး တဈဆငျ့ ဝယျသူရဲ့အိမျလညျး မီးလောငျရပါတယျ။
၂၀၁၁ ခုနှဈ နှဈဆနျးပိုငျးတုနျးကလညျး အမရေိကနျ Yorkshire မှာ ပနျးခြီကား ခြိတျဆှဲတဲ့ အိမျတဈလုံး မီးလောငျရပွနျပါတယျ။ အတျောကွာပွီ ဖွဈတဲ့ သဘာဝလှနျ အရာဖွဈတယျလို့ ယုံကွညျလို့ ခြိတျဆှဲပွီး ယခုလို ဖွဈရပျနဲ့ ထပျကွုံရတာ ဖွဈပါတယျ။ ဗွိတိနျမှာ ကတော့ ၁၉၈၅ ခုနှဈ လောကျကတညျးက ရှိသမြှ ပနျးခြီကားအားလုံးက သကျဆိုငျရာက မီးရှို့ ပေးခဲ့ပါတယျ။ သခြော ထားပွီး ရှို့ ရငျတော့ လောငျပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ ပနျးခြီကားရှေ့ မှာ မီးမှေးပွီး ကပျလကျြ ထောငျထားတော့ မီးမလောငျဘူးဆိုတာကိုလညျး သကျသေ ပွထားပါတယျ။ လောငျပမေယျ့ ဘေးက အနားလောကျသာ လောငျပွီး ငိုနတေဲ့ ကလေးကတော့ ဒီတိုငျးကနျြပါတယျ။
ငိုနသေော ကလေးငယျ သမိုငျး
ယငျးပုံကို Bragolin က မီးဘေးဒုက်ခသညျ ကလေးငယျတဈဦးကို ကွညျ့ပွီး ဆှဲခဲ့တာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ မိသားစု တဈခုလုံး အိမျမီးလောငျတဲ့ အထဲ ပါသှားပွီး မိဘမဲ့ ကလေးငယျအဖွဈ တဈဦးတညျးသာ ကနျြရှိပါတယျ။ ယငျး ကနျြရှိတဲ့ ကလေးငယျကို ပနျးခြီဆရာ Bragolin ချေါယူမှေးစားပွီး ယခုလို ပနျးခြီရေးဆှဲခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့တုနျးကတောငျ ယငျး ကလေးဟာ အရာဝတ်ထုကို မတိုမထိပဲ မီးလောငျနိုငျစတေယျလို့ ပတျဝနျးကငျြက ယုံတမျးစကားပွော တားမွဈခဲ့ပါသေးတယျ။ ယငျး စကားကို မမူပဲ ချေါမှေးစားပါတယျ။ ပနျးခြီ စတူဒီယို မီးလောငျတော့ ယငျးကလေးငယျဟာ ထှကျပွေးပွီး ပြောကျကှယျသှားပါတယျ။ နောကျ ၁၀ နှဈကွာတော့ ကား အကျဆီးဒနျ့ တဈခုနဲ့ သဆေုံးနတေဲ့ ဒရိုငျဘာ တဈဦးဟာ ထှကျပွေးသှားတဲ့ မိဘမဲ့ ကလေးဖွဈတယျဆိုတာကို သိရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒီတော့ ပနျးခြီကားနဲ့ သူ့ရဲ့ဆကျစပျမှုက ဘယျလိုရှိတယျဆိုတာ ဘယျသူမှ မခနျ့မှနျးနိုငျပါဘူး။ ကားတိုကျမှုနဲ့ သသှေားတဲ့ ကလေးငယျရဲ့အသကျ ဝိဉာဏျ သို့မဟုတျ မီးလောငျမှုမှာ သဆေုံးသှားတဲ့ သူ့မိသားစုရဲ့အသကျဝိဉာဏျ ကနျြရှိနတေယျလို့ အစှဲနဲ့ ယုံကွညျကွပွီး အားလုံး ကွောကျရှံ့ကွပါတယျ။
Supernatural ဆိုတာကို ယုံကွညျသူ ရှိသလို မယုံကွညျသူမြားလညျး ရှိပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ ယငျးပနျးခြီကား ကတော့ ယနတေို့ငျ Curse of the Crying Boy လို့ အမညျတှငျခဲ့ပါတယျ။